China usoro ọgụgụ isi nri n'elu ikpo okwu na-emepụta na suppliers | Baiyi
Aha aha: Standard nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
:Dị: BY-TF01 / 02-400; BY-TF01 / 02-400 （UV）; BY-HTF01 / 02-400; NA-HTF01 / 02-400 (UV); BY-MTF02-650(ụdị ise)
Njirimara:emepụtara ya maka ibipụta akwụkwọ (gụnyere akwụkwọ obibi akwụkwọ TIJ, HD DOD, ịkọ aha wdg). ọ nwere nnukwu ihe achọrọ na teknụzụ, ike zuru ezu, ngwa ngwa. Ọ na-anabata echiche ọgụgụ isi, ụdịdị, nke mepụtara nke ọma. Suit maka iche iche nke akwụkwọ, labeelu, kaadị, mbukota igbe, karịsịa maka ngwaahịa na static ọkụ eletrik, onwe akara, multi-oyi akwa plastic igbe wdg pụrụ iche mbukota akpa nzuzo, obibi & tracing. Enwere ụfọdụ nhọrọ nhọrọ maka nhọrọ dịka nchọpụta abụọ, dozie onwe ya, ịjụ akpaaka wdg.
Ọgụgụ isi nri n'elu ikpo okwu na-mepụtara dị ka elu chọrọ na njem. All adopts streamline na-arụ ọrụ mode na ọgụgụ isi nri modular. Ngwa ngwa ngwa, dị mma na nkwụsi ike, ọrụ siri ike, dị mma na njirimara, bara ọgaranya na ọrụ nhọrọ. Ọ bụghị naanị uwe maka ụdị ngwaahịa, kamakwa ọ nwere ahụmịhe nke ọma maka ọrụ onye ọrụ. Ihe ikpo okwu a na - eme ka ihe di elu na ihe eletriki eletriki nke mbu iji mee ka o sie ike.
Ọ nwere ọtụtụ ihe patent technology na adopts nkenke usoro technology na echesinụ àgwà akara ụzọ, nke ka a na usoro ngwaahịa nwere ike mma uru. Dabere na ngwa dị iche iche, e nwere ngwaahịa ise ：
1. ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (Nlereanya: BY-TF01 / 02-400);
2. ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & V obibi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (Model: BY-TF01 / 02-400 (UV));
3. Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (Nlereanya: BY-HTF01 / 02-400);
4. Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (Model: BY-HTF01 / 02-400 (UV));
5. Multi-ọwa nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (Model: BY-MTF02-400).
The Max dị iche n'etiti "ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu" na "ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & UV ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu" bụ ngwa oge. Standard nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu bụ uwe maka nkịtị ngwaahịa si nzuzo ngwa. Dị ka TIJ, CIJ, Laser wdg. Ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu na-onwem na Palsma maka ngwaahịa elu usoro na-agwọkwa ebe, nke bụ uwe maka UV obibi akwụkwọ usoro. Enwere ụfọdụ iche na teknụzụ.
"Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu" na "Akwa-ọsọ nwere ọgụgụ isi nri & UV ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu" mere nweta nkwalite maka nhazi dabeere na ọkọlọtọ n'elu ikpo okwu. Ọsọ dị ngwa ngwa, nkwụsi ike siri ike karị. Igwe ahụ na - ejide igwe nchara ma ọ bụ carbon nchara na eserese (agba nwere ike ịhazi ya), imezigharị ya zuru oke, ederede ọzọ. Equipmentdị ụdị 4 ndị a n'ihi ahụ siri ike na arụmọrụ ziri ezi, ha nwere ike ịnwe ụfọdụ ọrụ nhọrọ dịka usoro nchọpụta abụọ, usoro mmezi akpaaka, usoro nyocha ọhụụ, sistemụ nnabata. Ọrụ nhọrọ ndị a na-eme ka akụrụngwa nwee ọgụgụ isi na unmanned.
Multi-ọwa nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu na-adabere na ọkọlọtọ n'elu ikpo okwu na ọ bụ max bulie arụmọrụ ma belata oru-akwụ ụgwọ. Enwere ọwa abụọ ma ọ bụ karịa na-agba ọsọ ngwaahịa. Ndị mmadụ nwere ike ịhazigharị nri nri na otu ngwaahịa na-agba ọsọ na-agbanwe agbanwe mgbe ahụ maka akwa ngwaahịa. Ọ bụ otu n'ime anyị max elu-arụmọrụ ngwaahịa.
1. Standard nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
2. ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
3. Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
3. Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
1. ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
A. akụkụ: L * W * H = 3000 * 763 * 820mm
B. ibu: banyere 150-200KG
D. Ike: ihe dị ka 2KW
E. eriri agba ọsọ: 0-60m / min
F. akara: ugboro abụọ akakabarede / abụọ DC brushless ọsọ iwu
G. ikuku: ọ dịghị mkpa
H. feedingkpụrụ nri: esemokwu nwere ọgụgụ isi, nnyefe ala.
I. usoro ebufe: eriri ebu ebu
J. dị ngwaahịa: iche igbe akwụkwọ, mbukota akpa, labeelu, akwụkwọ, akwụkwọ ntuziaka wdg
K. ngwaahịa ha dị: L * W * H = (60-300) * (30-400) * (0.05-3) mm
L. ngwaahịa na-agba ọsọ ziri ezi: ± 1.5mm
M. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ carbon nchara na eserese (agba nwere ike ịhazi ya)
N. usoro nrụnye: nkwụnye ala, nkwụsị, akara mpụga.
O. ọkọlọtọ nhazi: ọgụgụ isi nri & agụụ mmiri ebu & akpaaka collection.
P. nhọrọ nhọrọ: nchọpụta abụọ, nyochazi onwe, usoro nyocha ọhụụ, ịjụ onwe ya.
A. akụkụ: L * W * H = 3600 * 763 * 820mm
B. ibu: banyere 200KG
M. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ carbon nchara na eserese （agba nwere ike ahaziri）
O. ọkọlọtọ nhazi: ọgụgụ isi nri & agụụ mmiri ebu & elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ njem & akpaaka-collection
B. ibu: banyere 200-250KG
E. eriri agba ọsọ: 0-100m / min
N. nwụnye usoro: n'ala-guzo offline, kabinet ụdị.
O. ọkọlọtọ nhazi: ọgụgụ isi nri & agụụ ebu & akpaaka-collection.
4. Akwa-ọsọ ọgụgụ isi nri & UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
A. akụkụ: L * W * H = 4220 * 763 * 820mm
B. ibu: ihe dị ka 250-300KG
D. ike: banyere 2.5KW
O. ọkọlọtọ nhazi: ọgụgụ isi nri & agụụ ebu & elu okpomọkụ na-eguzogide ebu & akpaaka collection
Nke gara aga: Nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu
Osote: Standard rewindo na TTO ngwa nbipute